Goolhaye David De Gea Oo Mushaar Qaali Ah Ka Dalbanaya Maamulka Man United Si Uu Old Trafford U Sii Joogo, Saamaynta Heshiiskii Sanchez Iyo Jawaabta Diyaarka U Ah Red Devils. – GOOL24.NET
Goolhaye David De Gea Oo Mushaar Qaali Ah Ka Dalbanaya Maamulka Man United Si Uu Old Trafford U Sii Joogo, Saamaynta Heshiiskii Sanchez Iyo Jawaabta Diyaarka U Ah Red Devils.
February 6, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Manchester United ayaa maanka ku haysa in markale Real Madrid ay isku dayi doonto sidii ay goolhaye David De Gea kula wareegi lahayd wuxuuna xidiga ree Spain xaaladan u adeegsanayaa in uu mushaar qaali ah kaga helo Manchester United haddiiba uu Old Trafford sii joogayo. Kadib markii ay Manchester United mushaarkii abid ugu qaalisanaa ee Premier League ay ku soo qaadatay Alexis Sanchez, ayuu markiisa De Gea dalbanayaa qandaraas aad qaali u ah.
Sida uu qoray wargayska The Sun, goolhaye David De Gea ayaa diyaar u ah in uu maamulka kooxdiisa ka dalbado in mushaarkiisa todobaadkii laga dhigo £375,000 kun oo gini isaga oo adeegsanaya heshiiska Alexis Sanchez uu hadda Manchester United usbuucii uu kaga qaato £500,000 kun oo gini taas oo qolka labiska United xaalad cusub ku abuurtay.
Heshiiska uu David De Gea hadda ku joogo Manchester United ayuu todobaadkii ku qaataa £210,000 kun oo gini laakiin waxa uu doonayaa si uu heshiis cusub ugu saxiixo Manchester United isla markaana uu u ilaawo xiisaha Real Madrid in mushaarkiisa todobaadkii laga dhigo £375,000 kun oo gini taas oo la micno ah in uu noqon karo xidiga labaad ee ugu mushaarka qaalisan Man United.
Paul Pogba ayaa hadda ah ciyaartoyga labaad ee Alexis Sanchez ku xiga ee mushaarka ugu badan ka qaata Manchester United isaga oo todobaad kasta u xaadira £290,000 kun oo gini laakiin De Gea ayaa doonaya in xataa uu Pogba ka mushaar bato si uu Man United ugu sii nagaado.
Paul Pogba laftiisa ayaa dhamaadka xili ciyaareedkan dalban doona in mushaarkiisa sare loo qaado iyada oo wakiilkiisu uu qorshan haddaba sii diyaariyay sida ay saxaafada England hore u shaaciyeen. Saamaynta heshiiska Alexis Sanchez ee qolka labiska Man United ayaa ah mid sare u kac wayn oo dhinaca mushaarka ah keeni kara.
Laakiin war uu Daily Mirror ka helay warbaahinta Spain ayaa sheegaya in Manchester United ay meel dhigatay qorshihii ay David De Gea kaga joojin lahayd Real Madrid ama ay lacag badan uga heli lahayd haddiiba uu diido in uu heshiis cusub saxiixo isla markaana uu go’aansado in uu baxo waxayna wararku sheegayan in Man United ay 115 milayn gini dul dhigtay madaxa De Gea.
Real Madrid ayaa muhiimada kowaad ka dhiganaysa saxiixa David De Gea marka uu xili ciyaareedkan soo dhamaado inkasta oo ay sidoo kale doonayso goolhayaha Chelsea ee Thibaut Courtois balse in De Gea uu mushaar aad qaali u ah ku xidhayo sii joogitaankiisa Old Trafford ayaa keeni karta in maamulka United ay go’aan adag gaadhi karaan.